Ngaba kufanelekile ukuba wakhe iSelfowuni okanye i-Mobile Site? | Martech Zone
Ngaba kufanelekile ukuba wakhe iSelfowuni okanye i-Mobile Site?
NgoLwesithathu, Juni 6, 2012 UAdam Omncinci
Ndihlala ndicinga ukuba ii -apps zeselfowuni ziya kuhamba ngendlela yesoftware yedesktop kodwa ayibonakali ngathi ii -apps ziyalila. Ngokuchasene noko, amaqonga onokwakha usetyenziso lweselfowuni aya efikeleleka ngakumbi yonke imihla (sakha iApple App kwiAppifier ye $ 500)… kwaye uninzi lwazo luxhasa zombini ithebhulethi kunye neselfowuni kuso nasiphi na isixhobo okanye iqonga.
Isigqibo phakathi kokwakha iwebhusayithi ehambayo okanye usetyenziso lweselfowuni ekugqibeleni sisigqibo esahlukileyo kwishishini lakho. Ukuba kunokwenzeka, iinkampani kufuneka ziphuhlise zombini ukuze zisebenzise la maqonga mabini anamandla. Ukuba inye kuphela enokukhethwa, ishishini kufuneka kuqala livavanye iinjongo kunye nezixhobo, emva koko ujonge ngamehlo umahluko ochazwe kwi-infographic kunye nabaphulaphuli abafuna ukufikelela kubo. Kuphela kungoko apho ishishini linokuthi lixelele ngokwenyani ukuba yeyiphi indlela yeselfowuni eya kubonelela ngexabiso, izibonelelo kunye namathuba kwintengiso enkulu yeselfowuni.
Ndiyakholelwa ukuba wonke umntu kufuneka abe newebhusayithi ehamba nayo, nokuba uthatha isigqibo sokuba nesicelo. Amanani ayahambelana ukuba abantu bajonge i-imeyile, ukukhangela iisayithi, ukuthenga kunye nokubukela iividiyo kwizixhobo zabo eziphathwayo kunanini na ngaphambili ... kwaye amanani ayakhula. Ngelixa uphuhliso lwewebhu olusebenzayo luvumela ubhetyebhetye, usetyenziso lusanikezela kakhulu, ngakumbi.
Ngaba kufanelekile ukuba wakhe iSoftware yeeFowuni okanye iWebhusayithi yeFowuni? by Intengiso ye-MDG
tags: usetyenziso lweselulauphuhliso lweselulaisayithi yeselulaiwebhusayithi yeselfowuni
Ukujonga isantya seSiza ngeTorbit Insight
Konke malunga neMifanekiso
Juni 21, 2012 ngo-3: 48 PM
Ndicebise abanye ukuba bajonge kakuhle nokuba bayayidinga na iapps. Ndicinga ukuba uninzi lwamashishini amancinci, kufuneka bagxile ekuphakameni iwebhusayithi efanelekileyo yeselfowuni kuqala kuthathelwa ingqalelo kuGoogle ukohlwaya ngokungabinayo. Emva koko, kamva ukuba ubona isidingo sosetyenziso lweselfowuni, ungongeza ngokulula enye yabo balwayo banomsindo.
Ifomathi yokutyikitywa kwe-imeyile
Jan 9, 2013 ngo-4: 37 PM
Umbuzo odidayo, kodwa ndicinga ukuba iwebhusayithi ephathekayo yeyona ilungileyo onokuthi uqale ngayo kwaye kamva ukuba uyafuna, ungaya kwiApp.